Fifidianana loholona: hanohana ny kandidàn’ny Irmar ny RPSD - ewa.mg
Fifidianana loholona: hanohana ny kandidàn’ny Irmar ny RPSD
News - Fifidianana loholona: hanohana ny kandidàn’ny Irmar ny RPSD
Antoko velona sy
miaina. Nitondra ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena sy ny eo
amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny eo anivon’ny antoko
“Manana mpifidy vaventy
izahay na tsy maro aza. Misy koa mpikambana ato amin’ny antoko
nirotsaka amin’ny antoko sy vondrona manohana ny fitondrana ka
manohana ny kandidà Irmar, miara-dia amin’ny filoha Rajoelina Andry
izahay. Anisan’izany ireo kandidà any Fianarantsoa sy
Toliara”, hoy ny filoha nasionalin’ny antoko RPSD,
Andriatsizehena Benja Urbain na i Bebin, omaly, tamin’ny resaka
Notsiahiviny koa fa tokony hatao
amin’ity taona ity ny fametrahana ny tenany sy ny sekretera
jeneraly, i Limbaza Stanislas, amin’ny alalan’ny kongresy , saingy
tsy tanteraka izany. “Nokasaina hatao any Mahajanga ny 20
novambra izao izany ary hamoriana vahoaka nefa izao mbola eto izao
ny coronavirus. Eo koa ny propagandy amin’ny fifidianana loholona
ka voatery hahemotra izany”, hoy ihany izy.
Manohana tanteraka ny
Nanteriny ny fanohanany izao
fitondrana izao ary efa nanomboka ny taona 2007, fony kandidà
ben’ny Tanàna, Rajoelina Andry tamin’izany. Niara-dalana sy
nanohana ny fitondrana Tetezamita koa ny RPSD teo anivon’ny UDRC
tamin’izany. “Anisan’ireo nandany ny Fandaharanasan’ny
fanjakana ankapobeny (PGE) izahay fony mbola depiote teny
Tsimbazaza aho”, hoy izy.
Amin’ny maha sosialy demokraty ny
RPSD, nambarany fa manohana sy miarahaba ny filoha Amerikanina
vaovao, i Joe Biden ny tenany. Manantena ny hahatsara kokoa ny
fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta ny RPSD amin’izany.
“Tokony hiasa mafy ny ambasadaoro roa tonta ao anatin’izany”, hoy
L’article Fifidianana loholona: hanohana ny kandidàn’ny Irmar ny RPSD a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 12/11/2020
Kitra any Frantsa: nodimandry i Tsilavo
Misaona ny tontolon’ny baolina kitra malagasy satria nodimandry, ny alakamisy 15 aogositra lasa teo, tany Frantsa, Andriamanivosoa Tsilavo (Tsitsi). Vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny antony nahafaty azy. Voalazan’ireo nanatri-maso fa nandeha mafy loatra ny fiara nentiny ka tsy nahatana hisatra, hany ka nifatratra tany amin’ny andrijiron’ny Tramway, tao amin’ny 55 Avenue de Rhin. Mafy ny dona nahazo ilay fiara ka sarotra ny namonjy an’i Tsitsi, na tonga ara-potoana aza ny mpamonjy voina.Raha tsiahivina, anisan’ny mpilalao baolina mahay ary misongadina any Frantsa i Tsilavo, izay vao 21 taona monja. Tao amin’ny klioban’ny Olympique Strasbourg izy no nilalao nialoha izao nahafaty azy izao, saingy efa nandrafitra ny ekipan’ny AS Pierrots Vauban Strasbourg, nandritra ny taom-pilalaovana telo, ihany koa Itompokolahy. Tompondaka L’article Kitra any Frantsa: nodimandry i Tsilavo a été récupéré chez Newsmada.
Fanafihana tany Toamasina :: Karohina ny naman’ireo efa-dahy matin’ny polisy
Tafaporitsaka ny telo tamin’ireo andian-jiolahy nifampitifitra tamin’ ny polisy tany Toamasina, afak’omaly. Mitohy ny fikarohana azy ireo, hatramin’ny omaly hariva. Tsy mbola nahenoam-baovao momba izany ny mpitandro filaminana. Napetraka any amin’ny tranom-patin’ ny hopitaly kosa ny fatin’ireo efa-dahy voatifitra. Nikasa hanafika mpandraharaha mpividy jirofo ireo lehilahy maromaro ireo saingy efa narahin’ny mpitandro ny filaminana, afak’ omaly tolakandro. Tsikaritr’ireo voalaza fa jiolahy ny polisy tonga teny an-toerana. Nifampitifita ny an-daniny sy ny an-kilany. Maty tsy tra-drano ny efatra tamin’ireo olon-datsy. Nandositra niaraka tamin’ny basy ny telo hafa. Tratra teo ihany koa ny bajaj izay voalaza fa vao avy nangalarina noentina hanaovana ilay asa ratsy. L’article Fanafihana tany Toamasina :: Karohina ny naman’ireo efa-dahy matin’ny polisy est apparu en premier sur AoRaha.
Famonoana polisy tany Fenoarivo Atsinanana : Sefo fokontany sy olona 17 nidoboka am-ponja
Volana maro taty aoriana, tratra ireo tompon’antoka tamin’ny halatra miaro vonoan’olona nahatsiravina, ary nahafaty mpitandro filaminana inspektera telolahy namita iraka, tany Ambohimadizina, fokontany Mahatsara Fenoarivo Atsinanana. Isan’ny voampanga ho nandray anjara mivantana tamin’izany ny sefo fokontany ao an-toerana, miaraka amin’ny zanany vavy. Taorian’ny fiakaran’ny raharaha teny anivon’ny fampanoavana, omaly, dia fantatra fa tsy afa-maina teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana ilay lehiben’ny fokontany sy ireo olona miisa 17 hafa, izay vehivavy ny roa ka naiditra am-ponja vonjimaika avokoa. Ilay zanaka sefo fokontany isan’ny voarohirohy niaraka tamin’ny rainy no nijoro ho vavolombelona, ka izy no nahazo fahafahana vonjimaika. Araka izany, azo lazaina fa nahafa-po ny rehetra, izay efa nitana ny sain’ny mpanara-baovao ny fanapahan-kevitra nivoaka tamin’ity raharaha vonoan’olona nahalasibatra polisy ity, ary naharitra ora 10 be izao ny fandinihana ny dosie. Raha tsiahivina, iraka hanao fanadihadiana amina mpandraharaha lavanila iray tany an-toerana ireto inspektera tsy nanao fanamiana ireto no lasibatry fitsaram-bahoaka, ny andron’ny 24 oktobra lasa teo . Tamin’ny fikaroham-baovao natao no nahafahana nisambotra olona miisa iraika ambin’ny folo tao amin’ny fokontany Ambohimahadizina, izay toerana nisehoan’ny fitsaram-bahoaka, ary roa no vehivavy tamin’izany. Ny alin’ny alahady 2 desambra lasa teo indray, no nosamborin’ny zandary sy ny polisy tao Fenoarivo Atsinanana, ny sivy ambiny, izay mbola voasaringotra tamin’ny famonoana ireo inspektera. Tao anatin’ny fahanginana tanteraka no nanaovan’ireo mpitandro filaminana nisahana ny raharaha ny fanadihadiana, izao nahitam-bokany izao. Any amin’ny fonjan’Ambalatavoahangy no miandry ny fotoam-pitsarana azy ireto olona nandray anjara mivantana tamin’ny famonoana nahafaty polisy miisa telo ireto. Andrasana indray izay mety ho tohiny. Valérie R. L’article Famonoana polisy tany Fenoarivo Atsinanana : Sefo fokontany sy olona 17 nidoboka am-ponja est apparu en premier sur .L’article Famonoana polisy tany Fenoarivo Atsinanana : Sefo fokontany sy olona 17 nidoboka am-ponja a été récupéré chez Triatra.
Tsara natomboka tamin’ny volana oktobra teo sy amin’izao novambra izao ny fambolena katsaka, hiadiana amin’ny firongatry ny bibikely (chenilles légionnaires) manimba azy raha iandrasana fiandohan’ny taona. Ho fiarovana ny voly katsaka sy karazam-boly hafa, mahita ireo mpamboly any amin’ny distrikan’i Mandoto fa maivana ny fisehony amin’izao vanim-potoana izao ka tsy tiany ny renikatsaka tonga amin’ny volana janoary, araka ny fanadihadian’ny minisiteran’ny Fambolena. Ho fisorohana ny fandaniana be loatra amin’ny fitsaboana ny voly ny fanombohana izany amin’izao fotoana izao. Tsy tsara raha andrasana fiandohan’ny taona ny fambolena katsaka. Mandeha ny asa fanamboaran-dalana Ambilobe-Vohémar, mirefy 180 km. Nilaza ny minisitry ny Asa vaventy, Andriantiana Ulrich, fa tsy vita ao anatin’ny fotoana fohy io asa nomena ny orinasa sinoa io. Hita any an-toerana, ankehitriny, ny fanotofana tany efa tonga eo Betsiaka, araka ny fanaraha-maso ataon’ny minisiteran’ny Asa vaventy. Koa manantena ny mponina any amin’iny faritra iny fa na iza na iza ho mpitondra vaovao eo, hitohy hatrany izany asa fanamboaran-dalana efa nandrasana taona maro izany. Araka ny hita ao amin’ny tetibolam-panjakana 2019, misy 199,4 miliara ariary ny fandraisana anjaran’ny fanjakana sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena amin’ireo orinasam-panjakana. 81,5 miliara ariary amin’izany ny fatiantoka hiantohan’ny Banky foiben’i Madagasikara. Miisa 51 ireo orinasam-panjakana manana sata Epic (Etablissements publics à caractère industriel et commercial). Ohatra vitsivitsy amin’ireo ny ACM, ny APMF, ny BCMM, ny INTH, ny Inscae, ny FTM …. L’article Vavao tambatra a été récupéré chez Newsmada.
Nahabe fanontaniana ny anaran’ireo mpilalao handrafitra ny Barea hiatrika ny lalao amin’i Etiopia sy i Niger. Nisy fiovana ny lisitra ka tao ireo nosoloina ary teo koa anefa ny nantsoina toa an’i Faneva Ima, miaraka amin’ireo mpilalao vaovao avy eto an-toerana.Mpilalao 29 ka fito ny avy eto an-toerana ny nantsoin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar, hiatrika an’i Etiopia sy i Niger, eo amin’ny andro fahadimy sy fahenina hiadian-toerana ho an’ny “Can 2022”, taranja baolina kitra. Tsy notazomina intsony i Hery Bastien fa nosoloina an’i Doddy, mpilalaon’ny Jet Kintana. “Lalàn’ny fifaninanana no nitranga. Naharesy lahatra ahy ny zava-bitan’i Doddy, nandritra ny lalao natrehiny tamin’ny “Orange pro league”, raha mitaha amin’i Hery Bastien, izay tsy tao amin’ny tanjany loatra tao ho ao. Tsy midika anefa izany fa tsy hantsoina intsony izy amin’ny manaraka”, hoy i Nicolas Dupuis.Tsy hiakatra kianja fa hankahery ny mpilalaoAnkoatra izany, nasaina manokana i Faneva Ima, hiaraka amin’ny Barea, hanome aina sy hankahery ireo mpilalao fa tsy hiakatra kianja akory.Fantatra fa naroso ho amin’ny 24 marsa ny lalao hihaonana amin’i Etiopia ka tanterahina ao amin’ny kianja Bahir Dar Stadium, 500 km avaratr’i Addis-Abeba, Renivohitra. Mila arovava sy orona manokana hanaovan’ireo mpilalao, hampisy tanjaka azy ireo amin’ny fanazarantena, noho ny toerana avo hilalaovana ka tsy misy rivotra loatra. Mitentina 50 euros na 125 000 Ar ny vidin’ny iray amin’izany, izay mbola angatahina amin’ny fanjakana. Tompondaka Ireo mpilalao nantsoin’i Nicolas Dupuis:Mpiandry tsatoby1- Melvin Adrien (FC Martigues, Frantsa)2- Randriamamy Mathyas (PSG U19, Frantsa)3- Ibrahima Dabo (JS St-Pierre, La Réunion)4- Razakanirina Nina (As Adema, Madagasikara)Vodilaharana5-Razakanantenaina Pascal (JS St-Pierre, La Réunion)6- Jérôme Mombris (Grenoble Foot 38, Frantsa)7- Sylvio Ouassiero (CS Fola Esch, Belzika)8- Romain Metanire (Minnesota United, USA)9- Jérémy Morel (FC Lorient, Frantsa)10- Ramanjary Théodin (Fosa Junior, Madagasikara)11-Razafindrabe Rajo (Cosfa, Madagasikara)12- Rakotondrazaka Ando (Elegeco Plus, Madagasikara)Irakiraka13-Andrianantenaina Anicet (PFC Ludogorets, Bolgaria)14- Randriambololona Zotsara (FC Fleury 91, Frantsa)15- Marco Ilaimaharitra (Royal Charleroi SC, Belzika)16-Raveloson Rayan (ESTAC Troyes, Frantsa)17- Ibrahim Amada (Al Markhiya, Qatar)18- Dimitri Caloin (Fleury FC, Frantsa)19- Andriamirado Arohasina Dax (JS St-Pierre, La Réunion)20- Loïc Lapoussin (RU Saint-Gilloise, Belzika)21- Rakotoarisoa Doddy Mathieu (Jet Kintana, Madagasikara)Lohalaharana22- Rakotoharimalala Njiva (Tsy misy klioba)23-Andriamahitsinoro Carolus (Al Qadisiya FC, Arabie-Saoudite)24- Ramalingom Alexandre (CS Sedan A, Frantsa)25- Hakim Abdallah (FC Swift Hesper, Belzika)26- Voavy Paulin (Misr El Makkasa, Egypta)27- Lalaina Nomenjanahary (Paris FC Frantsa)28- Manampisoa Lalaina (Disciples FC, Madagasikara)29- Razafindrasata Tsito (Jet Kintana, Madagasikara)L’article Kitra – Fihaonana amin’i Etiopia sy i Niger: nantsoina i Faneva Ima hanatevina ny Barea a été récupéré chez Newsmada.